Calaf Waa Halkiisa ! Qaybtii 1aad. Maxamed Siddiiq Dhamme |
Calaf Waa Halkiisa ! Qaybtii 1aad. Maxamed Siddiiq Dhamme
Marka la arko Naalleeye waxa la xasuusan jiray Nagaad, noloshooduna midbay ahayd waxay soo wada qaateen waqtiyo mahadho reebay, himiladoodu waxay
Waan ku raysan waayee
Rabbi lagama quustee
Way I ruux wareentay “
Shan gu’ iyo dheeraad ayay ahaayeen lammaane kalgacayl mideeyay oo mahuraan aan kala maarmi karin ah, habbeenkay is-barteen ilaa caawa niyadda kamuu saarin Naaleeye nafteeda. Wuxuu ku hammiyi jiray inuu ka dhigto ooridiisa oo ay wadaagan nolosha. Sikin qorarshaha kuma darin in qaddarka iyo qoraalka mawle kala fogayn karo jacayluu u qabo daraadii. Nagaad nafteeday ka jeclayd iyana oo wuxuu ahaa aragga dhaayaha ay wax ku aragto, saacad kasta haddaanu la hadal sawirkiisa wehel u ahaa. Codkiisa oo aanay maqal calaf kama daadagi jirin cabitaanna haba sheegin. Kalgacaylkoodu wuxuu ahaa kaalin gal lagu sabaaleeyay Kalsooni.
Marka la arko Naalleeye waxa la xasuusan jiray Nagaad, noloshooduna midbay ahayd waxay soo wada qaateen waqtiyo mahadho reebay, himiladoodu waxay ahayd inay hoy wadaagan oo nolosha meel ku wada qaatan. Midna midka kale muu ka filan inuu daba maro, dadaalka nolosha Naalleeye waxa dabada ka riixi jiray jacaylka daran ee nafatiisa naafeeyay. Taabka gabadhkale ma saarin tafteedeedana haba sheegin. naftiisa sidii diirad lagu hayo ayuu u ilaalin jiray jacaylkaaba baas duruufo badana. Qofkastay isabartaan wuxuu uga sheekayn jiray wanaaga Nagaad, jacaylka ka dhexeeya baaxadiisa iyo sida aanu uga maarmine ee ay u tahay qayb ka mida naftiisa.
Nagaad hooyadeed Haweeyi ubada iyaduu Alle siiyay, aabbaheed waxa gawracay mannaxayaashi gobollada waqooyi ololiyay ee faqashtii. Hooyadeed waxay la jeclayd mustqabal hirasho leh, inay qayrkeed dhaafto oo ay noqoto gashaanti la hiigsado. Hu’ hunguri iyo wax kastoo ay u baahato waa lala baal taagnaa. Jaamacadda sanadkanay qalin jabisay oo shaqo weli may qaban, dadaalkeedu se mayaree halkay ku aragto xayaysiis shaqo bannaanba waxay xerayn jirtay arji codsi shahaadooyinkeeda aqooneed ku lifaaqan yihiin. Waxbarashada aadbay ugu wacnayd waqtigii ay ardayada ahaydna waxay geli jirtay kaalmaha hore Nagaad.
Hadda labada gelinba gurigay ka shaqaysaa oo mashquul waxbarasho iyo mid shaqo toona ma saara, xaafadda waxa fasaxan yimi abtigeed Giire oo degen dalka Kanada si uu xaggaaga ula joogo madaama aanu muddo arag reerka. guriga waxa ku nool inan ay habar wadaag yihin Nagaad oo ay soo korsadeen. Waqtiga u badan waxay ku qaadataa qolkeeda hurdada wax akhris shaqo guri iyo isticmaalka internedka oo ay balaayo ku qabtay, saacad kamay maqnaan jirin baraha bulshaddu ku xidhiidho. Balwadeeda u weyni waxay ahayd Facebook-ga tan iyo waagu soo baxay waxay ka md ahayd hablaha u daacadda ah ee ugu isticmaalka badan.
Oday Giire wuxuu u bogay xannanada, xilkasnimada, xurmada, xaqdhawrka, dhego-nugaylkeeda, dhaqankeeda, dhabeelnimadeeda iyo siday hooyadeed u dhaqaalayso. Xiise gaaray ku abuurtay abtigeed oo ay ahayd markii ugu horaysay ee uu dalka yimaaddo nus-qarni ku dhawaad uu ahaa qurbe joog. Habbeenkii waxay isu raaci jireen hudheellada lagu caweeyo si ay ugasoo casheeyaan. Nagaad waa inan dhawrsan oo aan iridda aqalkooda dhaafin waligeed, habbeenkii markay soo sheekaystaan ee ay soo qaatan waqti ayay guriga kusoo noqon jireen iyagoo casho safaari lagu shaqlay u sida hooyo Haweeya. Habbeenadii uu joogay Giire waxay ku caweyn jireen hiddo-dhawr oo ah hudheel habbeenka Jimcaha lagu tumo heeso qaaciya, xiise gaaray leedahay madashaasi waxa la qaada heeso qaraamiya oo dareen taabd leh. Intabadan waxa ku caweeya dhallinyarada qurba joogta ah waxaanay buuxisay kaalintii Tiyaatarka.
Fasaxii ugu xiisaha badnaabuu ahaa Giire ee uu qaato sannadadan, laba arrinba mahadhay ku reebeen, kalgacaylka Nagaad, isbedelka riyada aad moodee dalka ka socodo, wuxuu dhoofay Hargaysa oo bandooya habbeen suuq la furraada h ajogtee adhigu duhurka hoydo, magaalo aan dhismayaasha cajiibka ah lahayn. Argagax iyo caga juglayn ciidaan aan naxayni ku hatigaan dadka. Magaalo dilka, boobka iyo kufsigu xalaal ka yahay oo aanad caban karin, cabsi darteedna la qariyo xuquuq kastoo la duudsiyo. Xasuuso hour miranayaa isbedelka weyn ee dalka ka jira ayuu aad ula dhaygagsan yahay, dhulkii uu yaraanti mari jiray oo dhismay, wuxu soo booqday dugsigii uulada la qoray waxbarashadiisii u horaysay. La socoo…….
-Maxamed Siddiiq Dhamme